डलर सटही गर्न अघि जानीराख्नुस् विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन देशको कति छ ? | News Polar
डलर सटही गर्न अघि जानीराख्नुस् विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन देशको कति छ ?
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ८९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ९४ पैसा तोकिएको छ । कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४३ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६२ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६३ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ। एक युरोको खरिददर १ सय ४० रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ ।
यस्तै एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकिएको छ । एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ९१ पैसा तोकिएको छ ।
एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १५ रुपैयाँ ९० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १७ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ। एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९५ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९७ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ । एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ८७ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ०६, २०७८, ११:३५:०६